ဖရီး ဝိုင်ဖိုင်တွေကို အန္တရာယ်ကင်းကင်း ဘယ်လို သုံးကြမလဲ?? - For her Myanmar
ဝိုင်ဖိုင် ဖရီးရတယ်ဆိုပြီး အပျော်မစောသင့်ပါနော်…
အခုခေတ်မှာတော့ အင်တာနက်ဆိုတာ အပျော်သက်သက်၊ အပျင်းပြေရုံသက်သက် သုံးနေကြတာ မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်…အင်တာနက်ကို သုံးပြီး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးစတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေကစလို့ ငွေလွှဲတာ၊ ငွေစစ်တာကအဆုံး သုံးလာကြပါပြီ။ အင်တာနက် သုံးတယ်ဆိုရာမှာကလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖုန်းဘေလ်နဲ့ အင်တာနက်ဒေတာ ဝယ်သုံးတယ်ဆိုတာအပြင် အင်တာနက်ကို အိမ်တွေမှာ တပ်ဆင် အသုံးပြုလာတာတွေ၊ နေရာတော်တော်များများမှာ ရနေတဲ့ ဝိုင်ဖိုင်စနစ်တွေကို အသုံးပြုကြတာတွေ စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ပေါ့နော်…
အဲဒီမှာမှ ကိုယ်တွေသုံးရတာ အပျော်ဆုံးက Public Wifi လို့ခေါ်တဲ့ အပြင်မှာ အလကားနေရင်း မိနေတဲ့ wifi တွေပါပဲ.. ဟုတ်တယ်မလား.. ညီမလေးရေ.. Wifi ရတယ်နော်ဆိုလို့ကတော့ေ ပျာ်ပြီပဲ 😀 ဒီထဲမှာမှ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုက တပ်ဆင်ပြီး သူနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ပေးသုံးတဲ့ Password ပါတဲ့ wifi တွေနဲ့ အလကားနေရင်း မိနေတဲ့ Wifi တွေ၊ Password မခံထားတဲ့ Wifi တွေကလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒီမှာ သတိထားစရာတွေ ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။
ဘယ်လိုကြောင့် ဘာတွေကို သတိထားရမှာလဲဆိုတော့..
Public Wifi တွေ ချိတ်ပြီး Facebook တို့ Messenger တို့မှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပို့ပေးတာတွေ၊ Online bank တွေနဲ့ ငွေလွှဲတာမျိုးတွေ တို့တွေက လွယ်လွယ်လေး တွေးပြီး လုပ်လိုက်တတ်ပါတယ်။ ဒါမျိုး လုံးဝ မလုပ်ပါနဲ့ ယောင်းတို့ရေ… ဒီလိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ ယောင်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေနဲ့ ယောင်းတို့ရဲ့ Password တွေကို ခိုးယူသွားနိုင်လို့ပါ။
ကဲ.. ဒါဆို Public Wifi တွေကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ဘယ်လို သုံးကြမလဲ?
Related article >>> မက်ဆင်ဂျာ (messenger) မီးလေး မစိမ်းတော့အောင် ဘယ်လို ပိတ်မလဲ?
(၁) Public Wi-Fi ကို အရေးမကြီးတာတွေအတွက်ပဲ သုံးပါ။
Wifi ကို အသုံးပြုနေစဉ် အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ ဘဏ်အကောင့်တွေ၊ အီးမေးလ်နဲ့ Social Application တွေ စတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေပါဝင်တာတွေ လုံးဝ မသုံးပါနဲ့ ယောင်းရေ… ဗီဒီယိုကြည့်ဖို့၊ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲဖို့ စတာတွေလောက်ပဲ သုံးတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ယောင်းရေ… Wi-fi ချိတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ File Sharing Option ကို ပိတ်ထားလိုက်ပါ။
(၂) Virtual Private Network (VPN) ကို အသုံးပြုပါ။
Public Wi-Fi ထဲမှာ လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိစေနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းက VPN ပါပဲနော်။ VPN ဟာ အသုံးပြုသူ နဲ့ VPN server ကြားက ဆက်သွယ်မှုတွေကို လုံခြုံအောင် encrypt ပြုလုပ်ပေးတာကြောင့် hacker တွေအနေနဲ့ အချက်အလက်တွေကို အလွယ်တကူ မခိုးယူနိုင်တော့ပါဘူး။ တချို့ VPN တွေက ယောင်းတို့ရဲ့ IP address ကို သူတို့ရဲ့ IP address နဲ့ ဖုံးပေးထားတာမျိုးတောင် ရှိပါတယ်။ ဒါတော့ ကိုယ်သုံးတဲ့ VPN ပေါ် မူတည်တာပေါ့နော်..
(၃) Certificate Warning လို့ပေါ်လာရင် လုံးဝမသုံးသင့်တော့ဘူးနော်
Browser တွေသုံးနေရင်းနဲ့ Certificate warning ဆိုပြီး ပေါ်လာတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် သတိအကြီးကြီး ထားသင့်ပါပြီ။ Certificate warning ဟာ website ရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီလို့ ညွှန်ပြနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook, Gmail, နဲ့ ဘဏ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အများကြီး ပိုပြီး ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် Certificate warning တွေ့ရင် အဲဒီ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ကို လုံးဝဆက်မကြည့်ပါနဲ့တော့ ယောင်းရေ…
(၄) Public Wifi ကိုစုံစမ်းပြီးမှ ချိတ်ပါ။
hacker တွေဟာ Wifi အတုထောင်ပြီးတော့လည်း အချက်အလက်တွေ ခိုးယူတတ်ပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ Wi-Fi ကို သေသေချာချာ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှ ချိတ်ဆက်ပါ။ နာမည်တူ Wi-Fi တွေရှိနေလားဆိုတာပါ ထပ် စစ်ဆေးပါ။ ဘယ်Wifi ပဲဖြစ်ဖြစ် သတိထားတာက မမှားဘူးမို့ File Sharing Option ကို WiFi ချိတ်တိုင်း ပိတ်ထားပါ ယောင်းရေ..
Two Factor Authentication ကတော့ account တစ်ခုကို log in ဝင်ဖို့ password အပြင် အခြား security check (လုံခြုံရေး စစ်ဆေးမှုစနစ်) ကိုပါ ဖြတ်သန်းရတဲ့ စနစ်ပါပဲ။ ယောင်းတို့ မြင်အောင် နမူနာ ပြရရင် သူ့ရဲ့စနစ်လေးက Facebook application မှာ Security and Login ထဲက Use two factor Authentication ကို on ထားလိုက်သလိုမျိုးပါပဲ။ သူ့ကို activate ပြုလုပ်ထားရင် တခြားစက်ကနေ ကိုယ့် account ထဲဝင်ဖို့ဆိုရင် password သာမက code ပါ ရိုက်ထည့်ရပါတယ်။ Hacker ဟာ password ကို သိသွားရင်တောင် code ကို မသိရင် account ထဲ ဝင်လို့မရတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ account ကို ပိုပြီး လုံခြုံသွားစေတာပေါ့နော်…
(၆) Antivirus software တွေကို ထည့်သွင်းထားပါ။
ယောင်းတို့နဲ့ Wifi မျှသုံးနေတဲ့ အခြားတစ်ယောက်က ယောင်းတို့သုံးနေတဲ့ စက်တွေ၊ ဖုန်းတွေကို မဟက်ခ်နိုင်အောင် Antivirus ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေက ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ယောင်းသုံးနေကျ စက်ထဲမှာ နောက်ဆုံး Version ဖြစ်တဲ့ Antivirus ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကို ထည့်သွင်းထားဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်..
Onlineshop လုပ်နေတဲ့ ယောင်းလေးတို့ရော Online နဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ယောင်းလေးတွေရော အွန်လိုင်းကနေ ငွေအပေးအယူ လုပ်နေရတဲ့ယောင်းလေးတွေရော ဖြူသန့် ရှာဖွေထားတာလေးတွေ ဖတ်ကြည့်ပြီး Public Wifi ကို အန္တရာယ်ကင်းကင်း သုံးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
References : Global Sign , Life Hacker
ဝိုငျဖိုငျ ဖရီးရတယျဆိုပွီး အပြျောမစောသငျ့ပါနျော…
အခုခတျေမှာတော့ အငျတာနကျဆိုတာ အပြျောသကျသကျ၊ အပငျြးပွရေုံသကျသကျ သုံးနကွေတာ မဟုတျတော့ပါဘူးနျော…အငျတာနကျကို သုံးပွီး စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးစတဲ့ အရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စတှကေစလို့ ငှလှေဲတာ၊ ငှစေဈတာကအဆုံး သုံးလာကွပါပွီ။
အငျတာနကျ သုံးတယျဆိုရာမှာကလညျး ကိုယျ့ဟာကိုယျ ဖုနျးဘလျေနဲ့ အငျတာနကျဒတော ဝယျသုံးတယျဆိုတာအပွငျ အငျတာနကျကို အိမျတှမှော တပျဆငျ အသုံးပွုလာတာတှေ၊ နရောတျောတျောမြားမြားမှာ ရနတေဲ့ ဝိုငျဖိုငျစနဈတှကေို အသုံးပွုကွတာတှေ စသဖွငျ့ အမြိုးမြိုးရှိကွတယျပေါ့နျော… အဲဒီမှာမှ ကိုယျတှသေုံးရတာ အပြျောဆုံးက Public Wifi လို့ချေါတဲ့ အပွငျမှာ အလကားနရေငျး မိနတေဲ့ wifi တှပေါပဲ.. ဟုတျတယျမလား.. “ညီမလေးရေ.. Wifi ရတယျနျော”ဆိုလို့ကတော့ေ ပျြာပွီပဲ 😀
ဒီထဲမှာမှ အဖှဲ့အစညျး တဈခုခုက တပျဆငျပွီး သူနဲ့ ဆကျနှယျနတေဲ့သူတှအေတှကျ ပေးသုံးတဲ့ Password ပါတဲ့ wifi တှနေဲ့ အလကားနရေငျး မိနတေဲ့ Wifi တှေ၊ Password မခံထားတဲ့ Wifi တှကေလညျး ရှိနပေါသေးတယျ။ အဲဒီမှာ သတိထားစရာတှေ ဖွဈလာတော့တာပါပဲ။
ဘယျလိုကွောငျ့ ဘာတှကေို သတိထားရမှာလဲဆိုတော့.. Public Wifi တှေ ခြိတျပွီး Facebook တို့ Messenger တို့မှာ အရေးကွီးတဲ့ အခကျြအလကျတှေ ပို့ပေးတာတှေ၊ Online bank တှနေဲ့ ငှလှေဲတာမြိုးတှေ တို့တှကေ လှယျလှယျလေး တှေးပွီး လုပျလိုကျတတျပါတယျ။ ဒါမြိုး လုံးဝ မလုပျပါနဲ့ ယောငျးတို့ရေ… ဒီလိုသုံးလိုကျတဲ့အခါမှာ ယောငျးတို့ရဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှနေဲ့ ယောငျးတို့ရဲ့ Password တှကေို ခိုးယူသှားနိုငျလို့ပါ။ ကဲ.. ဒါဆို Public Wifi တှကေို အန်တရာယျကငျးကငျးနဲ့ ဘယျလို သုံးကွမလဲ?
Related article>>> မကျဆငျဂြာ (messenger) မီးလေး မစိမျးတော့အောငျ ဘယျလို ပိတျမလဲ?
(၁) Public Wi-Fi ကို အရေးမကွီးတာတှအေတှကျပဲ သုံးပါ။
Wifi ကို အသုံးပွုနစေဉျ အရေးကွီးတဲ့လုပျငနျးတှေ၊ ဘဏျအကောငျ့တှေ၊ အီးမေးလျနဲ့ Social Application တှေ စတဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှပေါဝငျတာတှေ လုံးဝ မသုံးပါနဲ့ ယောငျးရေ… ဗီဒီယိုကွညျ့ဖို့၊ ဒေါငျးလုတျဆှဲဖို့ စတာတှလေောကျပဲ သုံးတာ အကောငျးဆုံး ဖွဈပါလိမျ့မယျ ယောငျးရေ… Wi-fi ခြိတျပွီးပွီဆိုတာနဲ့ File Sharing Option ကို ပိတျထားလိုကျပါ။
(၂) Virtual Private Network (VPN) ကို အသုံးပွုပါ။
Public Wi-Fi ထဲမှာ လုံခွုံစိတျခမြှု ရှိစနေိုငျတဲ့ အကောငျးဆုံး နညျးလမျးက VPN ပါပဲနျော။ VPN ဟာ အသုံးပွုသူ နဲ့ VPN server ကွားက ဆကျသှယျမှုတှကေို လုံခွုံအောငျ encrypt ပွုလုပျပေးတာကွောငျ့ hacker တှအေနနေဲ့ အခကျြအလကျတှကေို အလှယျတကူ မခိုးယူနိုငျတော့ပါဘူး။ တခြို့ VPN တှကေ ယောငျးတို့ရဲ့ IP address ကို သူတို့ရဲ့ IP address နဲ့ ဖုံးပေးထားတာမြိုးတောငျ ရှိပါတယျ။ ဒါတော့ ကိုယျသုံးတဲ့ VPN ပျေါ မူတညျတာပေါ့နျော..
(၃) Certificate Warning လို့ပျေါလာရငျ လုံးဝမသုံးသငျ့တော့ဘူးနျော..
Browser တှသေုံးနရေငျးနဲ့ Certificate warning ဆိုပွီး ပျေါလာတာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီလိုဆိုရငျ သတိအကွီးကွီး ထားသငျ့ပါပွီ။ Certificate warning ဟာ website ရဲ့ လုံခွုံရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး တဈခုခုဖွဈနပွေီလို့ ညှနျပွနတော ဖွဈပါတယျ။ Facebook, Gmail, နဲ့ ဘဏျတှနေဲ့ ပတျသကျလာရငျ အမြားကွီး ပိုပွီး ဂရုစိုကျရပါမယျ။ ဒါကွောငျ့ Certificate warning တှရေ့ငျ အဲဒီ ဝကျဘျဆိုကျဒျကို လုံးဝဆကျမကွညျ့ပါနဲ့တော့ ယောငျးရေ…
(၄) Public Wifi ကိုစုံစမျးပွီးမှ ခြိတျပါ။
hacker တှဟော Wifi အတုထောငျပွီးတော့လညျး အခကျြအလကျတှေ ခိုးယူတတျပါတယျ။ ဆိုငျရဲ့ Wi-Fi ကို သသေခြောခြာ စုံစမျးစဈဆေးပွီးမှ ခြိတျဆကျပါ။ နာမညျတူ Wi-Fi တှရှေိနလေားဆိုတာပါ ထပျ စဈဆေးပါ။ ဘယျWifi ပဲဖွဈဖွဈ သတိထားတာက မမှားဘူးမို့ File Sharing Option ကို WiFi ခြိတျတိုငျး ပိတျထားပါ ယောငျးရေ..
Related Article >>> ဘယျရာသီခှငျတှကေ အားကစားလုပျရမှာ အပငျြးဆုံးဖွဈမလဲ
(၅) Two Factor Authentication ကို အသုံးပွုပါ။
Two Factor Authentication ကတော့ account တဈခုကို log in ဝငျဖို့ password အပွငျ အခွား security check (လုံခွုံရေး စဈဆေးမှုစနဈ) ကိုပါ ဖွတျသနျးရတဲ့ စနဈပါပဲ။ ယောငျးတို့ မွငျအောငျ နမူနာ ပွရရငျ သူ့ရဲ့စနဈလေးက Facebook application မှာ Security and Login ထဲက Use two factor Authentication ကို on ထားလိုကျသလိုမြိုးပါပဲ။ သူ့ကို activate ပွုလုပျထားရငျ တခွားစကျကနေ ကိုယျ့ account ထဲဝငျဖို့ဆိုရငျ password သာမက code ပါ ရိုကျထညျ့ရပါတယျ။ Hacker ဟာ password ကို သိသှားရငျတောငျ code ကို မသိရငျ account ထဲ ဝငျလို့မရတော့ပါဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့ account ကို ပိုပွီး လုံခွုံသှားစတောပေါ့နျော…
(၆) Antivirus software တှကေို ထညျ့သှငျးထားပါ။
ယောငျးတို့နဲ့ Wifi မြှသုံးနတေဲ့ အခွားတဈယောကျက ယောငျးတို့သုံးနတေဲ့ စကျတှေ၊ ဖုနျးတှကေို မဟကျချနိုငျအောငျ Antivirus ဆော့ဖျဝဲလျတှကေ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ ယောငျးသုံးနကြေ စကျထဲမှာ နောကျဆုံး Version ဖွဈတဲ့ Antivirus ဆော့ဖျဝဲလျတှကေို ထညျ့သှငျးထားဖို့တော့ လိုတာပေါ့နျော..
Onlineshop လုပျနတေဲ့ ယောငျးလေးတို့ရော Online နဲ့ အလုပျလုပျနရေတဲ့ ယောငျးလေးတှရေော အှနျလိုငျးကနေ ငှအေပေးအယူ လုပျနရေတဲ့ယောငျးလေးတှရေော ဖွူသနျ့ ရှာဖှထေားတာလေးတှေ ဖတျကွညျ့ပွီး Public Wifi ကို အန်တရာယျကငျးကငျး သုံးနိုငျကွလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ အဆငျပွကွေပါစေ ယောငျးတို့ရေ…
Tags: Free, hacker, laptop, Onlineshop, password, Phone, public, wifi
သင်္ကြန်မှာရေဆော့ရင်း ဖုန်းထဲရေဝင်သွားတဲ့အခါ ပျက်စီးမှုနည်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ